Ị nọ ebe a : >lọ>FAQ
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka usoro mmepụta, oge izizi bụ ụbọchị 7-20 ka ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge mbu ga-adị mma ma (30) anyị enwetara nkwụnye ego gị, yana (1) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko jiri ire gị na-ere ihe ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, anyị na-enwe ike ime ya.
You na-ekwe nkwa mbuputa ngwaahịa na echekwa?